Etu esi ege redio redio na ngwaọrụ ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ege redio redio n’igwe na ngwaọrụ ọ bụla
Ignacio Sala | | Ndị na-egwu egwuregwu, gụgharia
Ugbu a ihe niile ma ọ bụ ihe niile na - eme na ịntanetị. N'ihi ịntanetị anyị nwere ike ịge egwu ọ bụla anyị chọrọ, lelee ọhụụ kachasị ọhụrụ nke usoro kachasị amasị anyị ma ọ bụ ihe nkiri ọhụụ kachasị ọhụrụ. Anyị nwekwara ike ịnweta akwụkwọ akụkọ ọdịnala, akwụkwọ akụkọ na ọbụna na redio nke ndụ.
Na ọbịbịa nke ọrụ egwu gụgharia, redio hụrụ otú isi ọrụ ha si na-emebi nke nta nke nta. Ndị mmadụ chọrọ ige ntị na egwu ha kachasị amasị, na-enweghị mgbasa ozi ma na-enweghị onye na-eweta ihe ga-eme paripe tupu itinye ya.
Otu uru nke ịntanetị, nke metụtara redio, bụ na ọ na-enye anyị ohere ige ntị na ọdụ anyị kachasị amasị anyị site na kọmputa anyị, na-enweghị iji redio ndụ anyị niile, redio ndị yiri ka naanị ha na-ejide 40 ma ọ bụ Radio 3.
Ọzọkwa, maka ndị nwere ihu ọma, ma ọ bụ nwute, ibi mba ọzọ ma ọ bụ nọrọ ogologo oge, ọ bụ ụzọ dị mma iji na-anụ akụkọ sitere na mba ha na-enweghị chigharia na igwe onyonyo.
Zọ kachasị ọsọ iji nweta ọdụ ụgbọ mmiri kachasị amasị anyị bụ site na weebụsaịtị ha. Ma enwere ndu karia ihe ndi ozo nke ndu. N'ihi ịntanetị, anyị nwere ike chọta ọdụ site na mpaghara ma ọ bụ mba ndị ọzọ nke dabara na mmasị anyị, mkpa anyị ma ọ bụ mmasị anyị.
Igwe ndị mbụ e hiwere na ahịa, tinye mgbawa FM, mgbawa nke mere ka ige ntị na redio ọdịnala (ha jiri isi okwu dị ka antenna). N'ụzọ dị mwute, ọ dị ka ndị na-emepụta ihe na-akụ nzọ na obere na ọrụ a n'agbanyeghị na ha bara ezigbo uru mgbe ọdachi ndị na-emere onwe ha na-eme na ụzọ nkwukọrịta isi kwụsịrị ịrụ ọrụ.
1 Ogige Ubi
4 Ebe nrụọrụ weebụ Radiowe
6 Redio Redio
Ogige Ubi bụ otu n’ime ọrụ ntanetị kacha ewu ewu ma saa mbara maka ige ụlọ ọrụ redio sitere na gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị anyị na-enye ohere ibe weebụ iji nweta ọnọdụ anyị, ọ ga-egosi anyị ọdụ kacha nso na ọnọdụ anyị, nke ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe nzuzu, ọ bụghị.
Dabere na ọnọdụ anyị, ọ ga-egosi mpaghara kacha nso ebe ọdụ ụgbọ dị, agbanyeghị na ọ ga-eme nyocha site na mpaghara na mba ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọdụ anyị na-achọ adịghị, anyị nwere ike dejupụta fọm iji tinye n'ọrụ a.
Ọ bụrụ na anyị amata aha ọdụ anyị chọrọ ige ntị, anyị nwere ike ịbanye na ya ka anyị gaa ọdụ ebe ahụ. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, anyị chọrọ ige ntị, dịka ọmụmaatụ, ọdụ ọ bụla na Venezuela, anyị nwere ike gafere ụwa na mba ma pịa ntụpọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị iche iche na-anọchite anya ọdụ redio nke mba ahụ.
Redio Garden dịkwa n'ụdị ngwa maka iOS na gam akporo, ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu site na njikọ ndị a.
Ogige Redio Livefree
Developer: Ogige Redio BV
TuneIn bụ ihe ọzọ na-ewu ewu ọrụ maka gee ntị na redio ịntanetị si mba ọ bụla. Ọ na-enye anyị ohere ịnweta ihe karịrị ụlọ ọrụ redio 100.000 gburugburu ụwa na mgbasa ozi, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa iji zere mgbasa ozi ma na-enwe ike ịnụ ụtọ egwuregwu NFL, MLB, NBA na NHL.
O nwere otutu ulo oru Spanish, na Spain na Latin America, obu ezie na ndi na-ege ya nti di na United States, site na ebe anyi nwere ike ige otutu onu ogugu na mba niile. Anyị nwekwara ike gee otu pọdkastị ahụ na anyị nwere ike ịchọta n'elu ikpo okwu ọ bụla ọzọ.
Ọ dakọtara na ha abụọ Amụma Amazon dị ka Ụlọ Google site na Google na mgbakwunye na ịdị adị na ndị nrụpụta okwu Sonos. Ọ dịkwa maka iOS na gam akporo, ngwa ndị ị nwere ike ibudata n'efu site na njikọ ndị a.
TuneIn Radio: AM FM ozi ọmafree
TuneIn Radio: Akụkọ, Egwuregwu & Ebe Egwu AM FM
Si buscas ọdụ ndị dị na Spain, Redio bụ ọrụ ị na-achọ. RadioFy na-enye anyị interface dị mfe ebe anyị ga-ede aha ụlọ ọrụ anyị chọrọ ige ntị ma ọ bụ pịgharịa na ibe ahụ ruo mgbe anyị chọtara ọdụ anyị chọrọ ige ntị, ebe a na-egosipụta ndị kachasị ewu ewu.
Ebe nrụọrụ weebụ Radiowe
Ebe nrụọrụ weebụ Radiowe ọ na-egosi anyị ndeksi nke mba ebe anyị nwere ike ige ntị na ọdụ redio, yabụ ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya ịtụle ọ bụrụ na ị na-achọ ọdụ sitere na mba ụfọdụ. Site na ịpị na mba ọ bụla, anyị na-enweta ebe nrụọrụ weebụ mba site na ebe anyị nwere ike ịnweta ọdụ ndị dị na mba ahụ.
myTurner bu ozo web peeji nke na enye anyi ohere nweta ọdụ redio site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla n'ụwa. Ozugbo ị banyere na ebe nrụọrụ weebụ gị, a ga-egosipụta ụlọ ọrụ redio nke mba ebe anyị nọ. N'akụkụ aka ekpe, anyị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ igosi naanị ọdụ na mpaghara ma ọ bụ mpaghara anyị.
Ọ bụrụ na ị pọdkastị na-amasị gị, na myTurner, kwa ị ga-ahụ ụdị dị iche iche, ihe fọrọ nke nta ka anyị nwee ike ịchọta ya na ntanetị ọzọ. Ọ dịkwa maka ngwaọrụ mkpanaka n'ụdị ngwa, yabụ ọ bụrụ na anyị enweghị kọmpụta n'aka, anyị nwere ike iji ama ma ọ bụ mbadamba anyị.
IPhone Radio: myTuner FM Rediofree
myTuner Radio Online na Redio FM
Developer: Appgeneration - Redio, Pọdkastị, Egwuregwu
Mana ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ige ọdụ ọdụ ndị ọzọ, chọpụta egwu ọhụrụ, gee ntị n'ụdị egwu ndị ọzọ, ọ dịghị nke dị n'elu na-ejere anyị ozi (dịka) Internet Radio na-arụ. Site na Redio Redio Anyị nwere ike ige ụlọ ọrụ redio dị ka ụdị egwu ha na-agbasa, ọ bụghị site na aha ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ site na ebe ya.
Ozugbo ị banyere weebụ, a na-egosipụta ụdị ndị kachasị ewu ewu. Mgbe ịpị ụdị ndị a, a ga-egosipụta ha ọdụ niile na-enye ụdị ụdị ahụMa ọ bụ polka, funk, mkpụrụ obi, Tejano, anime, ihunanya, zuo ike, trance, ihere, ịgba egwu, jazz, blues, kpochapụwo nkume, mba, metal, salsa, hip iwuli elu ...
Dika anyi puru ihu uzo ichota ohuru ohuru nke Radio Redio na enye anyi, anyi agaghi achota ha n’ebe ndi omenaala di. Ọ bụrụ na anyị chọta ọdụ anyị masịrị anyị, anyị nwere ike budata ndepụta .m3u iji mepụtaghachi ya na ngwa ọ bụla dakọtara na-enweghị iji weebụsaịtị.
Ọrụ jupụtara na thatntanetị nke na-enye anyị ohere ige ntị na ọdụ ụgbọ anyị kacha amasị anyị. Ọ bụrụ na n'ime nhọrọ dị iche iche m gosiri gị n'isiokwu a, ị nweghị ike ịchọta ọdụ ị na-achọ, ọ nwere ike ọ dịghị adị. Lee anya ọzọ, ebe ọ bụ na ọrụ ndị a kachasị dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-egwu egwuregwu » Etu esi ege redio redio n’igwe na ngwaọrụ ọ bụla
ONkwanyere SmartLife: Ihe ọ bụla Honor gosipụtara iji melite katalọgụ ya
Mmekọrịta kachasị mma na ngwaọrụ (izu nke Mee 18 ruo 24)